Kismaayo News » Ganacsigii Islii oo hoos u dhacay qaraxyadda dartood
Ganacsigii Islii oo hoos u dhacay qaraxyadda dartood
Kn: Gudiga ganacsatada xaafadda Islii ee Nairobi oo shalay shir jara’id ka hadlay waxa ay sheegeen in hoos u dhac weyn ku yimid ganacsiga Islii iyada oo lagu jiro bishii macaashka badan la heli jirey ee December.
Xusseen Aar oo ah gudoomiyaha ganacsatada iyo Sheekh Maxamed Shakuul oo hadlay waxa ay sheegeen in dadkii xaafadda iman lahaa ay ka baxaqaan in la;isku qarxiyo sidii mudooyinkii ugu dambeeyeyba dhacayna, ayna waxanu u egyihiin wax laga dambeeyo.
“Waxa ay doonayaan in aan cararno, oo aan cabsanno, haddii aan sidaasi yeelnana inta keena ugu dambeeya uu xuduuda gudbayo waa nala ceersanaa” ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada oo hadlayay.
Waxa ay dadka u sheegeen in ay is dajiyaan, iyagoo ciidamada Police-ka ku eedeeyey in aysan amaanka waxbo ka qabanin, kaliyana ay xaafadda soo buux dhaafiyaan marka ay wax dhacaan, xiliyadda kalana aanan il la saarin.
Caadi ahaan bisha December oo fasaxyo la galayo Kenya oo dhan iyo ciidda masiixiga ee Chrismaska oo la aadayo, ayaa la dareemaa sare u kac ganacsiga, balse sanadkani ma jirto saxmaddii hore iyo mashquulkii hore qaraxyadda dartood.